ओली सरकारका २० मन्त्री हट्ने आदेशमा सर्वोच्च अदालतसँग प्रचण्डको सेटिङ? महेश बस्नेतले यसरी खोले पोलNepalpana - Nepal's Digital Online
नेपालपाना आषाढ ८ २०७८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० मन्त्री थपेर गरेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट बदर गरेको छ ।
तर यो फैसलामा नयाँ ट्विस्ट आएको छ । विपक्षी गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजै २० मन्त्री हट्न लागेको सूचना दिएका थिए । र त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्चबाट त्यस्तै आदेश भएपछि सेटिङ भएको अनुमान गरिएको छ ।
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हिजै भविष्यवाणी गरेको भन्दै उनले सेटिङको प्रश्न उठाएका छन् ।
हिजो धादिङमा कार्यकर्ताबीच प्रचण्डले सर्वोच्चले २१ जना मन्त्रीहरू पदमुक्त गराइदिने सूचना आफूले पाएको भनेर बोलेको समाचार केही मिडियामा आएका थिए । बस्नेतले प्रचण्डको उक्त भविष्यवाणी कसरी मिल्न गयो ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
आषाढ ८, २०७८ मंगलवार १८:३४:०१ बजे : प्रकाशित